ऑफुले चाहेको कुराहरू प्राप्त गर्नका लागी यो मन्त्रको जप गर्नुहोस… ॐ ॐ ॐ – Khabar PatrikaNp
August 24, 2020 133
एजेन्सी । धर्म ग्रन्थका अनुसार देवी दुर्गा माताको पुजा गर्दा भक्तको मनाकांक्षा पुरा हुने विश्वास गरिन्छ। हुनत दुर्गा मातासँग सम्बन्धीत अनेकौँ ग्रन्थको रचना भएको छ।तर ती मध्ये दुर्गासप्तशती महत्वपूर्ण मानिन्छ। जुन व्यक्तिले विधि विधानसहित दुर्गा माताको पाठ गर्छन्, उनको मनोकांक्षा पुरा हुने विश्वास गरिन्छ।
ज्योतिषाचार्य मनिष शर्माका अनुसार दुर्गासप्तशतीमा यस्तो एक मन्त्र छ, जुन मन्त्र जप गर्दा तपाईको मनोकांक्षा पुरा हुन सक्छ। यदी तपाई सुन्दर र सुशील पत्नी चाहनुहुन्छ भने उक्त मन्त्र जप गर्नुभयो भने तपाईको मनोकांक्षा पुरा हुनेछ।यस्तो छ मन्त्र पत्नी मनोरमां देही मनोवृत्तानु सारिणीम् । तारिणीदुर्गसं सारसागरस्य कुलोद्धवाम् ।।
मन्त्रको अर्थ, हे देवी मलाई मेरो मनोकांक्षा अनुसार मनोहर पत्नी प्रदान गर, जो दुर्गम संसार सागरसँग तरने तथा उत्तम कुलमा उत्पन्न भएको हुनुपर्यो।मन्त्र जप गर्ने विधि, विहान चाँडै नुहाएर सफा बस्त्र लगाउनुहोस्। त्यसपछि दुर्गामाताको पुजा गर्नुहोस्।
दुर्गा माताको मूर्ती तथा तस्वीर अगाडि आसन लगाएर रुद्राक्षको माला लिएर यस मन्त्रको जप गर्नुहास्। प्रत्येक दिन पाँच माला जप गर्नुभयो भने तपाईको मनोकांक्षा पुरा हुने शास्त्रमा उल्लेख छ।आसन सकेसम्म कुशको भयो भने राम्रो हुनेछ। हरेक दिन एकै समयमा, एकै आसनमा बसेर एकै माला जप गर्दा पनि तपाईको मनोकांक्षा चाँडै पुरा हुनेछ।
र याे पनि हेर्नुसः
तपाईंको राशि के हो, ज्योतिषशास्त्र भन्छ यी चार राशि भएका…
ज्योतिष शास्त्रमा व्यक्तिका विभिन्न कालखण्डको अवस्था, धन, लाभ, हानी अदीबारे व्याख्या गरिएको पाइन्छ । मानिसको ग्रह दशा र भाग भोग उसको जन्ममिति, स्थान र समयका आधारमा तयार हुने ज्योतिषशास्त्रमा बताइएको छ ।
ज्योतिष शास्त्रले व्यक्तिको उत्तम समय, खराव समय त्यसबाट बच्न प्रयोग गर्ने विधि र तरिका बारेपनि व्याख्या गरेको हुन्छ ।ज्योतिषमा राशि अनुसार मानिसले धन सम्पत्ति आदी कमाउन योग्य हुन्छ । ज्योतिष अनुसार कुनै राशीका मानिसलाई धन बढी मात्रामा फाप्छ भने कुनै राशी भएकालाई विद्या आदी ।यी चार राशि भएका मासिन मिहेनतमा विश्वास राख्छन् । त्यस्तै उनीहरुलाई धन आर्जन कसरी हुन्छ भन्ने पनि जानकारी हुन्छ ।
यस सूचीमा सवैभन्दा पहिलो नाम छ वृष राशिको भएका मानिसको । जो शुक्र ग्रहको प्रभावमा हुन्छन् । शुक्र ग्रह धन, विलासिता तथा रोमान्सको सूचक हो । तसर्थ जसको वृष राशि रहेको छ उनीहरु विलासी तथा धनवान हुने छन् भने धन कमाउने अवसरको खोजी गर्ने खालका हुने गरेका छन् ।
दोस्रो छ वृश्चिक राशि
दोस्रोमा वृश्चिक राशि रहेको छ । यो राशि हुनेहरु भौतिक वस्तुसँग बढी प्रेम गर्ने खालका हुन्छन् । गाडी, ठूलो घर, धेरै फैलिएको सम्पत्ति । यी सवै चिजले यो राशि भएकालाई आकर्षित गर्छ । आकर्षित मात्र गर्ने होइन कि यस्ता चिज पाउनका लागि यि राशि भएका मानिसहरु लागि पर्छन् र हासिल गरिछाड्छन् ।
तेस्रो राशि कर्कट हो जो अवसरको तलासमा रहने गर्छन् । यी भावुक हुन्छन् र आफ्नो परिवारसँग नजिकको सम्बन्ध बनाउँछन् । यि राशिभएका हरुको उदेश्य आफ्नो परिवारका सदस्यलाई हरसमय खुसीमा राख्नु हुनेछ । यस मानसिकता र स्वभावका कारण यिनिहरु हरेक क्षण मिहेनत गर्छन् । यी राशि भएकाहरु मिहेनति हुन्छन् र त्यसको फल राम्रो नै निस्कन्छ । जसका कारण यी धनवान हुन्छन् ।
सिंह राशि भएकाहरु भीडमा आफ्ना पहिचान बनाउनका लागि लागि पर्छन् । उनीहरु आफ्नो पहिचान अरुको भन्दा फरक बनाउँन खोज्छन् । उनीहरुको उदेश्य अरुले याद गरुन् भन्ने खालको हुन्छन् । यी राशि भएका मानिसहरु महंगो खालको मोबाइल बोक्ने खालका गाडी मा घुम्ने खालका हुन्छन् जसका कारण अरु मानिसले उनीहरुलाई नोटिश गरुन् । जसका लागि धनको आवश्यकता त पर्छनै । यो राशि भएकाहरु पनि आर्थिक रुपमा सवल हुन्छन् ।
र यो पनिः दैविक शक्ति भएकाे मन्दिर ‘जहाँ आफै घण्ट बज्छ’
कृष्ण न्यौपाने,दमौली । तनहुँको म्याग्दे गाउँपालिका–३ किल्चोकस्थित निकै पुरानो धार्मिक स्थल अकलादेवी मन्दिरलाई उजिल्याउन स्थानीयवासी जुटेका छन् ।यस ठाउँलाई धार्मिक पर्यटनको गन्तव्य स्थल बनाउन सकिने भए पनि प्रचारप्रसारको अभावमा ओझेलमा परेको भन्दै स्थानीयवासी यस ठाउँको प्रचारप्रसारका लागि जुर्मुराएका हुन् ।अकलादेवी मन्दिर व्यवस्थापन समितिले मन्दिरको विकासका लागि गुरुयोजना निर्माण गरेर अगाडि बढेको व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष मिनबहादुर बराई मगरले बताए । मन्दिरको सर्वाङ्गीण विकासका लागि डिपिआरसमेत तयार भएको छ । मगरका अनुसार डिपिआर बमोजिम मन्दिर क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणका लागि रु चार करोड बजेट आवश्यक पर्ने देखिएको छ ।
“प्रशस्त सम्भावना भएर पनि प्रचारप्रसारको अभावमा यो मन्दिर ओझेलमा पर्दै आएको महशुस गर्यौ,” अध्यक्ष मगर भने – “सरोकारवाला निकायको सहयोगमा यस ठाउँको विकास र प्रचारप्रसारका लागि जुटेका छौं ।” मन्दिरको आफ्नै विशेषता छ, त्यो हो – मन्दिरमा रहेका घण्ट आफैं हल्लिनु । धेरैलाई यो सुन्दा आश्चर्य लाग्ला । कसैले नहल्लाइकन पनि घण्ट आफैं हल्लिन्छ र ? तर, मन्दिरमा रहेका घण्ट आफैं हल्लिएको देख्दा यहाँका स्थानीयवासी मात्र होइन मन्दिरमा पूजाअर्चना गर्न जाने भक्तजन समेत चकित पर्ने गरेका छन् ।
अकलादेवी खुशी भएका बेला मन्दिरभित्र रहेको घण्ट आफैं हल्लिने र बज्ने गरेको स्थानीय बासिन्दाको भनाइ छ । देवी प्रशन्न भएको अवस्थामा रातको समयमा घण्ट बज्ने गरेको स्थानीयवासी बालहरि घिमिरे बताउछन् । “यज्ञयज्ञादि, धार्मिक अनुष्ठान र पञ्चबलि दिएका बेला देवी प्रशन्न भएर घण्ट बज्ने र हल्लने गरेको छ,” उनले भने – “यो दैवीशक्तिको चमत्कार हो ।”
विसं २०४२ देखि मन्दिरमा शङ्ख र घण्ट बजेको सुनिन थालेको स्थानीयवासी बताउँछन् । त्यो बेला तत्कालीन प्रज्ञा पण्डित गङ्गाधर घिमिरेलगायत स्थानीयवासीले यस बारेमा जानकारी गराएपछि ‘यो दैवीशक्ति हो र यसको संरक्षणका लागि केही काम गर्नुपर्छ’ भनेर संरक्षणको काम शुरु गरिएको व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष मगर बताउछन् । “घण्ट हल्लने कुरा वास्तविक हो, यो हल्ला होइन । मन्दिरमा पञ्चबलि लिएर आएको समयमा घण्ट हल्लन्छ,” उनले भने – “किनकि त्यो बेला देवी खुशी हुनुहुन्छ ।” आफूले समेत दुई पटकसम्म पञ्चबलि दिएको र त्यो बेला प्रत्यक्ष रुपमा घण्ट हल्लिएको देखेको मगरले बताए ।
मन्दिरमा नौ वर्षदेखि पूजारीको रुपमा कार्यरत टोपबहादुर सारुले देवीको शक्तिका कारण मन्दिरमा रहेका घण्ट आफैं हल्लिने गरेको बताए । उनका अनुसार मन्दिरमा दैनिक ५०÷६० जना भक्तजन पूजाआजाका लागि आउने गरेका छन् ।
केही दिनअघि मात्रै मन्दिरको अवलोकन लागि पुगेका जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख शान्तिरमण वाग्लेले विशिष्ट प्रकृतिको यस मन्दिरको प्रचारप्रसार र विकासका लागि स्थानीयवासी सक्रिय भएर लाग्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए । विसं २०५५ सालमा मन्दिरमा योगी नरहरिनाथले ८५ औें कोटी होम लगाउनुभएको थियो । यस क्षेत्रमा धार्मिक शक्ति भएको कारण नरहरिनाथले यहाँ कोटीहोम लगाएको स्थानीयवासी बताउँछन् ।
जीर्ण अवस्थामा रहेको मन्दिरको पुनः निर्माण शुरु भएको छ । समितिको आन्तरिक कोषको रकमबाट जेठ १८ गतेदेखि मन्दिरको पुनः निर्माणको काम शुरु गरिएको छ । रु ६३ लाख ५० हजारको लागतमा शुरु भएको पुनः निर्माणको काम आगामी कात्तिकसम्ममा सम्पन्न हुने निर्माण समितिका संयोजक रामभक्त घिमिरेले जानकारी दिए । मन्दिर पुनः निर्माणका लागि भनेर समितिले केही समय अगाडि महायज्ञको आयोजना गरेको थियो । उक्त महायज्ञमा करीब रु एक करोड दान सङ्कलन भएको थियो । मन्दिर व्यवस्थापन समितिले मन्दिरको डिपिआर तयार गरी भजनकीर्तन भवन, पाटीहरु गोलाकार शैलीमा निर्माण गर्ने योजना बनाएको छ ।
मन्दिर क्षेत्रमा वनभोज स्थल पनि निर्माण गरिने घिमिरेले बताए । डिपिआर अनुसारका सबै संरचना निर्माणका लागि तीन वर्ष लाग्ने अनुमान गरिएको छ । घिमिरेका अनुसार पुनःनिर्माण सम्पन्न भएपछि वार्षिक रु १० लाख आम्दानी हुने अनुमान गरिएको छ ।
अकला मन्दिरको बाहिर पुरानो आदिकालदेखिको सिंह र नन्दिनी अर्थात् साढेको स्तम्भ छ । उक्त प्रतिमा निकै पुरानो रहेको अनुमान लगाइन्छ । मन्दिर नजिकै पञ्चबलि दिने स्थान र हवनकुण्ड पनि छ ।
अकलादेवी मन्दिरको दक्षिण पश्चिममा रुद्रदेवीको मन्दिर छ । अकलादेवी र रुद्रदेवीको महिमा गानका लागि वर्षमा चार वटा रुद्री लगाउने गरिन्छ । यस ठाउँमा हरेक वर्ष वैशाख, साउन, कात्तिक र माघमा रुद्री लगाउने प्रचलन रहिआएको छ ।रासस via Ehulaki
Prevजण्डिस निको पार्ने एक मात्र औषधी :भुइँअमला
Nextसुनको भाउ लगातार ओरालो; आजपनि घट्यो तोलामा कति? हेर्नुहोस्..
झापाको दमकस्थित भुटानी शरणार्थी शिविरमा आगलागी हुँदा एक व्यक्तिको मृत्यु
कस्तो राम्रो काम ! ‘हुनेले दिएर जाऔँ, नहुनेले लिएर जाऔँ’ …! सेयर गरौ
अन्तत अनिशाले धुरुधुरु रुदै भनिन – ‘म कन्चनलाई अझै पनि माया गर्छु’ (पुरा भिडियो हेर्नुहोस) (32755)
कलिलो यु’वतीहरु राखेर यौ’न धन्दा : भिडियो हेर्नुहोस (27395)